प्रचण्डले बोलाए नेकपाको सचिवालय बैठक, के विषयमा हुँदैछ छलफल? - Everest Dainik - News from Nepal
प्रचण्डले बोलाए नेकपाको सचिवालय बैठक, के विषयमा हुँदैछ छलफल?
काठमाडौंः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठक बोलाएका छन् ।
अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपचारका लागि सिंगापुर जानु अघि नै सचिवालय बैठक बोलाउने अधिकार प्रचण्डलाई दिइएको थियो ।
प्रचण्डले भोलि विहान १ बजे पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सचिवालय बैठक बोलाएका बताइएको छ । बैठकमा महानगर इन्चार्ज तथा सहईन्चार्जका साथै प्रवास कमिटीबारे छलफल हुनेछ ।
याे पनि पढ्नुस नेकपा चियापानलाई संवोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘राष्ट्रिय एकता अझ सुदृढ गर्नुपर्छ’
ट्याग्स: प्रचण्ड, सचिवालय बैठक